कारोबार दैनिक, ०६७ पौष ४
सरकारको नेतृत्व गर्न एमाले तयार छ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको ६ महिना बित्न लागिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन । व्यवस्थापिका संसद्मा १६ पटक भएको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा बहुमत जुट्न नसकेपछि सरकार गठन भएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमाले नै करिब ६ महिनासम्म तटस्थ बस्यो । उसले उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्ष कतै पनि ...
२०६६ बैशाख ७ राजनधानी दैनिक
२०६६ बैशाख ७ राजनधानी दैनिक \_'द्वैध सैनिक संरचना कायम राखेर कसरि रास्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्छ ? एउटा प्राइभेट आर्मी भएको पार्टी र एउटा नागरिक पार्टी बीच कसरि सहमति कायम हुन सक्छ ?\_' २०६६ बैशाख ७ गते \_'राजनधानी दैनिक\_'ले प्रकाशित गरेको अन्तर्वार्ता । ० केन्द्रीय कमिटीको चौथो आकस्मिक बैठक सकिएको छ, यो बैठकको मुख्य उपलब्धि के रह्यो ? – बैठकका मुख्य दुईवटा एजेन्डा थिए । एउटा, राजनीतिक निकासका सन्दर्भमा एमालेको ...
२०६६ बैशाख ५ बुधबार साप्ताहिक
पहिले त माओवादी माओवादी नागरिक पार्टी बन्नु पर्यो I विगतमा भएका सहमति पालना हुनु पर्यो I माओवादीले गरेका सहमति र सम्झौता गाउँमा गरिने कपाली तमसुक हैनन् I \_' २०६६ बैशाख ५ गते \_'बुधबार साप्ताहिक\_'ले प्रकाशित गरेको अन्तर्वार्ता । राजनीतिक संकट समाधानका लागि के–के हु“दैछ ? – सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौं । सहमति कुनै दल वा नेताको स्वार्थका लागि होइन, राष्ट्रका ...
interview in Naya partika
सत्तासाझेदारीमा कांग्रेस माओवादीको तनावले निकास निस्केन ईश्वर पोखरेल, महासचिव नेकपा एमाले अहिले तपाईको पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु विदेशमै हुनुहुन्छ, संबेदनशील राजनीतिलाई कारण देखाउदै तपाईले आफ्नो विदेश भ्रमण रद्ध गर्नु भो, तपाई साच्चै संबेदनशील हुनु भएको हो कि आलोचनावाट बच्ने काइदा मात्रै हो ?
प्रमुख पदहरूमा महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष छान्न पाउनुपर्छ
० तपाईंहरूको पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा लोकतान्त्रीकरणका लागि नयाँ प्रस्ताव आएको छ । त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? – त्यो नयाँ प्रस्ताव होइन । त्यो केन्द्रीय कमिटीले छलफलपश्चात् जारी गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमाथिको संशोधनको पूरक प्रस्ताव हो । त्यसैले यो संशोधन वा पृथक प्रस्ताव भन्दा पनि पूरक प्रस्ताव हो । यस प्रस्तावका मुलभूत कुराहरू अत्यन्तै सकारात्मक छन् । र, अब आउने दिनमा नेकपा (एमाले) वास्तवमा केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव गरिएका विचारहरू र त्यसको थप व्याख्यासहित आएका पूरक प्रस्तावहरूले निर्देश गरेअनुरूप नै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।
सरकारमा हाम्रो सहभागिताको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ
० नयाँ नेतृत्व आउनसाथ बैठक बस्ने गथ्र्यो । तर, यसपटक झन्डै एक महिनापछि बैठक बस्दै हुनुहुन्छ, महाधिवेशनको तुष नमेटिएरै ढिला भएको हो ? – सामान्यत: अलिकति ढिलाइ भएकै हो । तर, महाधिवेशनका बेला देखापरेका तुष मेटाउन भनेर होइन । यो परिस्थिति नै त्यस्तै पर्‍यो । महाधिवशेनको लगत्तै संविधानसभाका सदस्यहरू देशव्यापी रूपमा सुझाव सङ्कलनका लागि जानैपर्ने कार्यतालिकालाई पर सारौँ भन्न सक्ने स्थिति थिएन । संविधानसभाको सदस्यका हैसियतले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित उल्लेख्य सङ्ख्याका साथीहरू सुझाव सङ्कलनका लागि बाहिर जानैपर्ने थियो । हामी त्यहाँ अनुपस्थित भएर बैठक गर्दा त्यो राष्ट्रिय कार्यसूचीमा हाम्रो प्रत्यक्ष संलग्नता र भूमिका कमजोर हुन्थ्यो । पहिलो बैठकमा महत्वपूर्ण सङ्ख्यामा साथीहरू अनुपस्थित हुने कुरा उचित हुँदैनथ्यो । त्यसकारणले ढिलाइ भएको हो । यसबीचमा हामीले पदाधिकारीबीच आन्तरिक छलफल गर्दै गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण कुरा र निर्देशन गरेका छौँ ।
एमाले पहिलो पार्टी हुनेमा कुनै शंका छैन
नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल ४ मंसिरमा हुने संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–५ मा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार छन् । पार्टीको आठौं महाधिवेशनपछि महासचिवको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका पोखरेल राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभावशाली नेतासमेत हुन् । यस पटकको निर्वाचनमा जनताले जनप्रतिनिधिका रूपमा चयन नगरे क्षेत्रबाट अर्को पटक पुनः उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेर थप चर्चामा आएका पोखरेल आपूm विजयी बन्नेमा विश्वस्त छन् । प्रस्तुत छ उनै पोखरेलसँग चुनावी तयारी, एमाले विजयी बन्ने आधार र राष्ट्रिय राजनीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको मूल अंश ः हामी संविधान बनाउ“छौं, क्षेत्र बनाउ“छौं, देश बनाउ“छौं, सरकार बनाएर हामी ठीक ढंगले चलाउ“छौं एमाओवादी लोकतन्त्रविरोधी र अधिनायकवादको गन्धे भारी बोकेर हि“डिरहेको शक्ति हो भने नेपाली कांग्रेस यथास्थितिवादी चिन्तन, प्रवृत्ति र आचरण भएको पार्टी हो । यी दुवैलाई सम्भव भएसम्म लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील परिवर्तनको बाटोमा ल्याउने भूमिका एमालेले पूरा गर्नु परिरहेको छ । वैद्यजीले नेतृत्व गरेको माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गरे पनि हामीले वहा“हरूलाई राजनीतिक रूपले बहिष्कार गरेका छैनौं र गर्दैनौं पनि । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एमाले पहिलो पार्टी हुनेमा कुनै शंका छैन । यो एमालेभन्दा बाहिरकाले पनि भनेको कुरा हो । ० तपाईंको चुनावी अभियान कसरी अघि बढिरहेको छ ?
डरलाग्दा जुवाडेले देशलाई दाउमा राखेर जुवा खेले। त्यो जुवामा हामी कतिपय पनि आ-आफ्नै स्वार्थले नराम्रोसँग फँस्यौं। एमाले नेता इश्वर पोखरेलसँगको कुराकानी-
प्रत्यक्षमा नब्बे सिट नघाएर एमाले पहिलो शक्ति
(साँघु प्रतिनिधि धुम्बाराहीस्थित एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलको घरमा पुग्दा घरभरी कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र निर्वाचन क्षेत्रका अगुवाहरूको भीड थियो। काठमाडौं ५ नम्बर क्षेत्रमै मतदाता रहेका उच्च प्रशासक र भूतपूर्व प्रशासकहरूको पनि आवतजावत बाक्लिएको थियो। पोखरेल भने चुनावी रणनीतिको छलफलसंगै बालुवाटारतिरै मतदाता रहेका र समाजमा राम्रो प्रभाव रहेका केही बुद्धिजीवी तथा समाजका अगुवाहरूलाई व्यक्तिगत रुपमै टेलफोन गरेर सहयोगको याचना गरिरहेका थिए। उताबाट आएको जवाफ पनि मोबाइलमै प्रष्ट सुनिन्थ्प्यो 145हामीले अघिल्लो पटक नरहरि आचार्यलाई ठूलै आशा गरेर भोट दियौं, तर उनले न त राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै प्रभाव पार्न सके, न त आफ्नै पार्टीमा निर्णायक भूमिका खेल्न सके, त्यसैले यसपटक हाम्रो मत तपाइल्ाई हो। कम्तीमा तपाई जत्तिको नेतालाई जिताएर पठाउदा एउटा पार्टीको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ र हाम्रो क्षेत्रको सही प्रतिनिधित्व हुन्छ146। यस्तै यस्तै आश्वासनबाट उत्साहित हुदै एमाले महासचिव एवं काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार इश्वर पोखरेल साँघुसंग अन्तर्वार्ताका लागि तयार भए। उनले शुरुमै नरहरि आचार्य वा अन्य विपक्षी उम्मेदवारका बारेमा कुनै पनि व्यक्तिगत टिप्पणी नगर्ने भन्दै व्यक्तिगत प्रश्न नसोध्न पनि आग्रह गरे। जबकि बौद्धिक समुदायको मसिहा भन्न रुचाउने नरहरि स्वयं भने यतिबेला इश्वर पोखरेलसंगको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा हार्ने निश्चित देखिएर अराजनीतिक प्रचार र अपवित्र गठबन्धनमा लागेका छन्। तर, पोखरेल भने राजनीतिक विषयमा मात्र बोल्न तयार भए। एमाले महासचिव रहेकाले उनी आफ्नो क्षेत्रमा मात्र होइन देशभरी के के भइरहेको छ भनेर जानकारी पनि लिइरहेका थिए। प्रस्तुत छ पोखरेलसंगको कुराकानीका सम्पादित अंश–सम्पादक)